UPSOCL - Waa meel loo waxyoonayo - Geofumadas
UPSOCL - Waa meel lagu dhiirri geliyo
Ogast, 2014 Internet iyo Blogs, Leisure / waxyi
Aragtidu waa mid fudud, iyada oo aan lahayn dhinacyo, iyadoon xayeesiin, kaliya foomka raadinta iyo liiska aan la arki karin ee leh shan qaybood.
Waa goobta ah asal ahaan afka Spanish-ka ah ee UPSOCL, oo ​​loogu talagalay in lala wadaago waxyaabaha muhiim u ah adduunka. Waxyaabaha kormeeraoo orday, waxyaallaha qallafsan, iyo waxyaabo ay tahay in la arko.
Magaciisu wuxuu ka yimid UP = kor ku qoran Ingiriisi. Waxaan u maleyneynaa in fikradda ku jirta macnaha Shacabka, CL ay laheyd maalintiiba; laakiin hadda waa in uu leeyahay iskaashiyo kala duwan, SOCL waa dariiqa si loo soo gaabiyo ereyga bulshada.
Ugu dambeyntii, 58 kun taageerayaal ah oo Twitter ah, ku dhawaad ​​kun oo kun oo macaamiisha on YouTube iyo in ka badan laba milyan oo jecel Facebook, ma aha muhiim in la fahmo sababta loo yaqaan. Ereyada qorayaasha:
Maxaa dhacaya haddii aan joojinno isticmaalka internetka si aan u aragno eeyga oo dabagalaya daboolka ama qofka ku dhacaya webiga waxaanan bilawnay inaan u isticmaalno Fikrado faafaya oo beddeli kara sida aan u aragno aduunka? Maxaa dhacaya haddii aan qaadannay xaddi badan oo fikrado ah oo aan la heli karin Isbanishka aynu ka tirtirno farqiga luqadda? Taasi waa sida Upsocl u dhashay.
Tusaale ahaan, articles 7 oo aad xaqiiqda ka maqashay shabakadaha, oo lagu hormariyay UPSOCL:
Khariidadaha 35 ee ku caawin doona si loo fahmo dunida.
Buundooyinka iyo tallaabooyinka duur joogta:
Wareegyada Bayoolaji si ay ula shaqeeyaan dabeecadda oo aan ka soo horjeeda.
29 sawiradii hore Waxay ku tusi doonaan jilid wanaagsan, sida arrimuhu isbeddeleen.
Tusaale ahaan, gaari si uu u abaabulo maxaabiista.
Weligaa ma dhaaftay wadooyinka tani Google Earth?
Waa inaad aragto waxa ay tahay, sida iyo sababta ay u sameeyeen.
Maxaa dhacaya haddii GPS wuxuu bilaabi doonaa inuu kula hadlo?
Waxyaabo badan ayaa sidoo kale waa fiidiyoow. Qaar ka mid ah sida aad u dhiirrigeliso maadaama ay kufilan yihiin.
Marnaba ma arag Isbahaysiga Israel - Falastiin sharaxay sida ugu badan.
Mararka mawduuca uu noqdo mid ansax ah ...
Fikradaha Weyn, kuwaas oo isbedelaya nolosha dadka.
Waxay u muuqataa mid aad u fudud kuwa naga mid ah ee aan haysan baahi aad u daran.
Waxaan ixtiraameynaa asxaabta Upsocl.
Halkan waxaad booqan kartaa goobta. http://www.upsocl.com/
Post Previous«Previous Isticmaalka qawaaniinta saadaaliga ah ee ku yaalla xaaladaha geospatial
Post Next Isticmaalka GIS si loo xakameeyo oo looga hortago dengueNext »